Akụkọ - Egwuregwu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-agbacha agbacha silhouette
2022 mmalite mgbụsị akwụkwọ ihe eji eme egwuregwu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emetụta pragmatism, ọ ga-elebakwu anya n'ụdị ejiji na enwere ike eyi ọtụtụ oge; sitere n'ike mmụọ nsọ nke ihe ejiji egwuregwu na oge mgbụsị akwụkwọ 2021 na oge ọhụrụ oge oyi, gwuo n'ime usoro dị iche iche nke ejiji ejiji Ejiji silhouettes nke suut. Enwere ike iji ejiji dị mma n'ọtụtụ oge. The mgbanwe kemwepu imewe na fashionable splicing suut abawanye ahịa 'echiche nke mgbanwe mgbe ịbụ ndị ọzọ ooh; Ihe na-egbuke egbuke nke velvet na akwa sequin na-enye ọdịdị dị ala na egwuregwu egwuregwu. Ulo obibi di nma na-eme ka nkasi obi di ike site na itinye uzo zuru ezu na mgbanwe profaịlụ iji gboo mkpa na ihe bara uru nke otutu ejiji; mgbanwe nke oge ochie na-adịwanye iche ma na-agbasi ike na profaịlụ, na-ewetara ndị retro na 90s Design n'ike mmụọ nsọ.
A na-anụcha ụdị egwuregwu egwuregwu dị iche iche site na ihe ngosi kachasị ọhụrụ n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke 2021. E nwere ụdị egwuregwu dị iche iche dị ka ụdị teknụzụ ọdịnihu, ụdị ọrụ dị jụụ, usoro n'okporo ámá na ụdị ejiji; n'okpuru, anyị ga-edepụta ọtụtụ ụdị egwuregwu zuru ezu dabere na silhouette. Nchọpụta miri emi nke uwe ga-enye ndị na-emepụta ihe mmụọ nsọ iji zụlite uwe egwuregwu nke 2022 tupu oge mgbụsị akwụkwọ.
Kwado akwa na ịcha akwa bụ ụzọ ọhụrụ na mmalite oge mgbụsị akwụkwọ nke 2022, nke a na-eji ejiji egwuregwu ga-agbakwunye isi; mgbe ahụike dị n'ime ụlọ, ị nwere ike tinye uwe T-shirts ma ọ bụ waistcoats dị mkpụmkpụ na uwe ime egwuregwu iji zere ihere nke ịbụ nke gba ọtọ Otu oge, ọ na-eme ka mma dị mma ma nweta ịdị irè nke ịgbanwee n'etiti ọtụtụ ọnọdụ na otu uwe. Kinddị uwe a chọrọ nlebara anya n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2022.
Usoro nhazi a nwere ike ịpụpụ bụ usoro ọhụụ dị na mmalite oge mgbụsị akwụkwọ nke afọ 2022. Ọ na-agbanwe agbanwe ma na-apụ apụ n'okpuru njikwa nke ndị na-azụ ahịa, nke na-enye aka na njikwa okpomọkụ, njikwa ịchọ mma na ịbawanye arụmọrụ nke otu ngwaahịa ahụ; dị ka mwepụta ọhụrụ nke Adidas na oge ọhụrụ nke 2021 na American diva. Patternkpụrụ ahụ dị ala na usoro nkwonkwo nwere nkedo na nke nwere ike iwepụ n'úkwù na n'apata ụkwụ, nke nwere ike idozi ogologo nke ala yana ọbụlagodi nwere ike iji ya dị ka ịchafụ ejiji, na-achọpụta na ọ nwere ike iyi ọtụtụ ụdị n'otu uwe ; N'ime oghere aka uwe, ọgwụgwọ na-emerụ ahụ nke nkwonkwo aka ikpere ụkwụ nwere ike nweta ịdị adị nke ịdị irè na ịma mma mara mma.
A na-akpọ usoro ịmegharị ihe ọtụtụ oge na uwe na ejiji. Oge a, a na-elekwasị anya na usoro splicing nke otu agba uwe; na-eme ka akwa akwa akwa akwa ma ọ bụ ihe ịchọ mma dị iche iche dị n'akụkụ akụkụ nke aka uwe Ọ bụ ihe okike. Nke abuo, a na-eme ka a na-emechi agba agba na-acha odo odo iji mee ka ndị ahịa nwee mmasị igwu egwu. N'otu oge ahụ, enwere ike ịme ụdị agba agba na ntupu dị n'ime iji mee ka echiche nke ịchọ mma dị mma.
Uwe ejiji velvet na-egosipụta ntakịrị ọkụ, nke na-eweta okomoko dị mfe na uwe n'ozuzu ya. Ejikọtara ya na silhouette nke uwe egwuregwu, ọ na-eme ka mma ejiji dị elu na ndabere nke ịme nkasi obi egwuregwu; nke abuo, akwa sequin na akwa corduroy na-egbuke egbuke bụ ma ihe mbụ Nhọrọ dị mma n'okpuru ụdị.
Ulo obibi ohuru nke ohuru na-etinye uche nke oma na ngbanwe nke profaịlụ na ima nma nke nkowa dabere na ijide oru nkasi obi. Uzo ajuju banyere nkpu olu, icho mma nke ukwu ya na igbutu ukwu ya nile na achota ochicho nke ima nma ulo na nmalite mbido nke 2022. E nwere ike ibuputa uzo di iche na nke ala ka iwalite mmuta nke oru. n'ụlọ.
Ochie nwere mmetụta na ebe mgbụsị akwụkwọ 2021 na oge ọhụrụ. Uzo mbido mgbụsị akwụkwọ nke 2022 na-eche na uwe egwuregwu dị iche iche n'eleghị anya n'echiche nke edo edo akwụkwọ. Ọhụrụ na ìhè ochie ochie green embellished uwe na-agbakwụnye a ume ma na-egbuke egbuke mmetụta na usoro; n'otu oge ahụ, usoro ochie na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ Nkedo na njikọta nke ntanetị na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta dị ka a ga - asị na ha nọ na 90; Uwe ahụ jikọtara ọkara sket na jaket truncated agbanweela ihe ntorobịa na ụdị ejiji na profaịlụ.